သားအိမျတှငျးထညျ့ သန်ဓတေားပစ်စညျးပွနျလညျထုတျယူရာတှငျ သိရှိရမညျ့ အခကျြမြား - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ခတျေကွီးဟာ တဈဆတဈဆတိုးတကျလာတာနဲ့အညီ စီးပှားရေး၊ နထေိုငျစားသောကျရေး၊ သှားလာရေး တငျမက မြိုးဆကျပွနျ့ပှားရေးမှာပါ လိုအပျသလို ပွုလုပျနိုငျတဲ့ထိ အဆငျပွလှေပါတယျ… ဒီလို မြိုးဆကျပွနျ့ပှားခွငျးနဲ့ ပတျသတျလို့.. အမြိုးသမီးတှမှော မလိုအပျတဲ့ ကိုယျဝနျကို မရရှိစဖေို့ရာ birth control pills ၊ injections ၊ sterilization၊ IUDs အစရှိတဲ့ သန်ဓတေားမှု ပုံစံတှကေို အသုံးပွုလာကွပါတယျ…
ဒီထဲမှာက IUDs လို့ ချေါတဲ့ သားအိမျတှငျးထညျ့ သန်ဓတေားပစ်စညျး ပွနျလာ ထုတျယူရာမှာ သိရှိရမယျ့ အခကျြမြားကို ပွောပွခငျြပါတယျ…
IUD ဆိုတာ အားလုံးသိကွတဲ့ အတိုငျး သေးငယျတဲ့ သန်ဓတေား ပစ်စညျးလေး တဈခုပါပဲ…ပုံစံအားဖွငျ့ အင်ျဂလိပျ အက်ခရာ T (တီ) ပုံလေး ဖွဈပါတယျ.. ဒီလို IUD တှဟောဆိုရငျ Copper IUD နဲ့ hormonal IUD ဆိုပွီး အမြိုးအစားကှဲပွားပါတယျ..သူတို့တဲ့ လုပျဆောငျခကျြကတော့ မြိုးဥနဲ့သုတျပိုးကို ခဖြေကျြ သစေနေိုငျအောငျ ပွုလုပျခွငျးပါပဲ…
ဒီလို IUDsကို ပွနျလညျ ထုတျယူဖို့ရာက ဘာအကွောငျးတရားတှေ ကွောငျ့ပါလိမျ့?…
– ရငျသှေးယူဖို့ရာ အဆငျသငျ့ဖွဈခွငျး
– IUDsနဲ့ ဓာတျမတညျ့ခွငျး
– သားအိမျတှငျးထဲ ရောဂါတှရှေိ့ခွငျး
– မိမိကိုယျ၌က IUD ကို သဘောမကခြွငျးတှအေပွငျ
– IUD တဈခုရဲ့ သကျတမျးဟာ ၁၀ နှဈ ၅ နှဈ ၃နှဈ အစားစား ရှိတာမို့ သကျတမျးကုနျသှားတဲ့အခါမှာတော့ ပွနျလညျ ထုတျယူကာ အသဈ တဈခုကို အသုံးပွုခွငျးတို့ ဖွဈပါတယျ..
– IUD တှဟော ကွိုကျနှဈသကျတဲ့ အခြိနျမှာ ပွနျလညျ ထုတျယူလို့ရပါတယျ… သို့သျော တိကတြဲ့ ထုတျယူမှုတော့ လိုအပျပါတယျ…မိမိကိုယျတိုငျ ထုတျယူတာမြိုး မပွုလုပျသငျ့ပါ.. လလေ့ာမှုမြားအရ သငျ့ရဲ့ ရာသီသှေးဆငျးခြိနျမှာ သားအိမျတှငျးသားနံရံတှဟော ပိုမိုပြော့ပြောငျးနတေတျတာမို့.. ဒီလိုအခြိနျမြိုးတှမှော ထုတျယူခွငျးဟာ ပိုလှယျကူပါတယျ..
– ဆရာဝနျမှ သငျ့ရဲ့ သားအိမျလမျးကွောငျးကို စမျးသပျကွညျ့ပါမယျ..
– speculum လို့ ချေါတဲ့ သငျ့သားအိမျဝကို တှစေ့နေိုငျတဲ့ ပစ်စညျးဖွငျ့ မိနျးမကိုယျကို ခြဲ့ထားပါမယျ..
– IUD strings ချေါ ကွိုးစလေးကို ရှာရပါမယျ
– တှရှေိ့ပါက ညှပျဖွငျ့ ညငျသာစှာ နောကျသို့ ဆှဲယူ ထုတျခွငျးဖွငျ့.. IUD ဟာ သားအိမျဝကနေ ဖွညျးညငျးစှာ ထှကျလာပါလိမျ့မယျ…
ဒီလို ပွနျလုပျထုတျယူတာဟာ နာကငျြမှုလညျး မရှိသလို အခြိနျခဏသာ ကွာပါတယျ.. သို့သျော တခြို့သော အမြိုးသမီးတှမှော.. ကွိုးကို တိုတို ညှပျလိုကျခွငျးကွောငျ့ ဖွဈစေ၊ အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ သားအိမျတှငျးထဲ ကွိုးပါ ဝငျသှားပွီး ရှာမတှေ့ တတျတာမြိုး ဖွဈတဲ့အခါမှာတော့ ပိုမိုသေးငယျတဲ့ forceps တှေ clamps တှေ အသုံးပွုပွီး ထုတျယူရတတျပါတယျ…
ဒ့ါပွငျ ရှားရှားပါးပါး တခါတရံမှာ IUD က အရမျးကွပျပွီး ထုတျယူမရတတျတာမြိုး ဖွဈတတျပါတယျ… ဒီအခါမှာ သားအိမျတှငျးတှငျ ပစ်စညျးကနျြသေးကွောငျး သခြောအောငျ ultrasound ၊ X ray ၊ သားအိမျတှငျး မှနျပွောငျးဖွငျ့ ကွညျ့ခွငျး စတဲ့ လိုအပျတာတှေ ပွုလုပျရပါမယျ… ထိုမှ တဆငျ့ IUD အား တှရှေိ့ပါက အထကျမှာ ပွောခဲ့သလို သခြောစှာ ပွနျလညျ ထုတျယူနိုငျပါပွီ..လိုအပျပါက နာကငျြခွငျး မရှိစရေနျ လိုအပျတဲ့ ထုံဆေးကို အသုံးပွုပေးပါလိမျ့မယျ..
အကယျ၍ မိမိဟာ IUD မှ တခွားသော သန်ဓတေားမှု ပုံစံပွောငျးခွငျး(သောကျဆေးသို့ ပွောငျးခွငျး) (သို့) ရငျသှေးရဖို့ ကွိုးစားခွငျး စတဲ့ အရာတှကေိုတော့ သကျဆိုငျတဲ့ ဆရာဝနျဆီမှာ schedule အခြိနျဇယားကို သခြောစှာ ဆှေးနှေးနိုငျပါတယျ…
သာယာလှပတဲ့ အိမျထောငျမှုနှငျ့ ကနျြးမာပြျောရှငျသော အမြိုးသမီးမြားဘဝကို ပိုငျဆြုငျကွပါစလေို့ တောငျးဆုမတ်ေတာပွုလကျြ….
သားအိမ်​တွင်းထည့်​ သ​န္ဓေတားပစ္စည်းပြန်​လည်​ထုတ်​ယူရာတွင်​ သိရှိရမည့်​ အချက်​များ
​ခေတ်​ကြီးဟာ တစ်​ဆတစ်​ဆတိုးတက်​​လာတာနဲ့အညီ စီးပွား​ရေး၊ ​နေထိုင်​စား​သောက်​​ရေး၊ သွားလာ​ရေး တင်​မက မျိုးဆက်​ပြန့်ပွား​ရေးမှာပါ လိုအပ်​သလို ပြုလုပ်​နိုင်​တဲ့ထိ အဆင်​​ပြေလှပါတယ်​... ဒီလို မျိုးဆက်​ပြန့်​ပွားခြင်းနဲ့ ပတ်​သတ်​လို့.. အမျိုးသမီး​တွေမှာ မလိုအပ်​တဲ့ ကိုယ်​ဝန်​ကို မရရှိ​စေဖို့ရာ birth control pills ၊ injections ၊ sterilization၊ IUDs အစရှိတဲ့ သ​န္ဓေတားမှု ပုံစံ​တွေကို အသုံးပြုလာကြပါတယ်​...
ဒီထဲမှာက IUDs လို့ ​ခေါ်တဲ့ သားအိမ်​တွင်းထည့်​ သ​န္ဓေတားပစ္စည်း ပြန်​လာ ထုတ်​ယူရာမှာ သိရှိရမယ့်​ အချက်​များကို ​ပြောပြချင်​ပါတယ်​...
IUD ဆိုတာ အားလုံးသိကြတဲ့ အတိုင်း ​သေးငယ်​တဲ့ သ​န္ဓေတား ပစ္စည်း​လေး တစ်​ခုပါပဲ...ပုံစံအားဖြင့်​ အင်္ဂလိပ်​ အက္ခရာ T (တီ) ပုံ​လေး ဖြစ်​ပါတယ်​.. ဒီလို IUD ​တွေဟာဆိုရင်​ Copper IUD နဲ့ hormonal IUD ဆိုပြီး အမျိုးအစားကွဲပြားပါတယ်​..သူတို့တဲ့ လုပ်​​ဆောင်ချက်​က​တော့ မျိုးဥနဲ့သုတ်​ပိုးကို ​ချေဖျက်​ ​သေ​စေနိုင်​​​အောင်​ ပြုလုပ်​ခြင်းပါပဲ...
ဒီလို IUDs​​ကို ပြန်​လည်​ ထုတ်​ယူဖို့ရာက ဘာအ​ကြောင်းတရား​တွေ ​ကြောင့်​ပါလိမ့်​?...
- ရင်​​သွေးယူဖို့ရာ အဆင်​သင့်​ဖြစ်​ခြင်း
- IUDsနဲ့ ဓာတ်​မတည့်​ခြင်း
- သားအိမ်​တွင်းထဲ ​ရောဂါ​တွေ့ရှိခြင်း
- မိမိကိုယ်​၌က IUD ကို သ​ဘောမကျခြင်း​တွေအပြင်​
- IUD တစ်​ခုရဲ့ သက်​တမ်းဟာ ၁၀ နှစ်​ ၅ နှစ်​ ၃နှစ်​ အစားစား ရှိတာမို့ သက်​တမ်းကုန်​သွားတဲ့အခါမှာ​တော့ ပြန်​လည်​ ထုတ်​ယူကာ အသစ်​ တစ်​ခုကို အသုံးပြုခြင်းတို့ ဖြစ်​ပါတယ်​..
- IUD ​တွေဟာ ကြိုက်​နှစ်​သက်​တဲ့ အချိန်​မှာ ပြန်​လည်​ ထုတ်​ယူလို့ရပါတယ်​... သို့​သော်​ တိကျတဲ့ ထုတ်​ယူမှု​တော့ လိုအပ်​ပါတယ်​...မိမိကိုယ်​တိုင်​ ထုတ်​ယူတာမျိုး မပြုလုပ်​သင့်​ပါ.. ​လေ့လာမှုများအရ သင့်​ရဲ့ ရာသီ​သွေးဆင်းချိန်​မှာ သားအိမ်​တွင်းသားနံရံ​တွေဟာ ပိုမို​ပျော့​ပျောင်း​နေတတ်​တာမို့.. ဒီလိုအချိန်​မျိုး​တွေမှာ ထုတ်​ယူခြင်းဟာ ပိုလွယ်​ကူပါတယ်​..
- ဆရာဝန်​မှ သင့်​ရဲ့ သားအိမ်​လမ်း​ကြောင်းကို စမ်းသပ်​ကြည့်​ပါမယ်​..
- speculum လို့ ​ခေါ်တဲ့ သင့်​သားအိမ်​ဝကို ​တွေ့​​စေနိုင်​တဲ့ ပစ္စည်းဖြင့်​ မိန်းမကိုယ်​ကို ချဲ့ထားပါမယ်​..
- IUD strings ​​​ခေါ် ကြိုးစ​လေးကို ​ရှာရပါမယ်​
- ​တွေ့ရှိပါက ညှပ်​​ဖြင့်​ ညင်​သာစွာ ​နောက်​သို့ ​ဆွဲယူ ထုတ်​ခြင်းဖြင့်​.. IUD ဟာ သားအိမ်​ဝက​နေ ဖြည်းညင်းစွာ ထွက်​လာပါလိမ့်​မယ်​...
ဒီလို ပြန်​လုပ်​ထုတ်​ယူတာဟာ နာကျင်​မှုလည်း မရှိသလို အချိန်​ခဏသာ ကြာပါတယ်​.. သို့​သော်​ တချို့​သော အမျိုးသမီး​တွေမှာ.. ကြိုးကို တိုတို ညှပ်​လိုက်​ခြင်း​ကြောင့်​ ဖြစ်​​စေ၊ အ​ကြောင်းအမျိုးမျိုး​ကြောင့်​ သားအိမ်​တွင်းထဲ ကြိုးပါ ဝင်​သွားပြီး ရှာမ​တွေ့ တတ်​တာမျိုး ဖြစ်​တဲ့အခါမှာ​တော့ ပိုမို​သေးငယ်​တဲ့ forceps ​တွေ clamps ​တွေ အသုံးပြုပြီး ထုတ်​ယူရတတ်​ပါတယ်​...
ဒ့ါပြင်​ ရှားရှားပါးပါး တခါတရံမှာ IUD က အရမ်းကြပ်​ပြီး ထုတ်​ယူမရတတ်​တာမျိုး ဖြစ်​တတ်​ပါတယ်​... ဒီအခါမှာ သားအိမ်​တွင်းတွင်​ ပစ္စည်းကျန်​​သေး​ကြောင်း ​သေချာ​အောင်​ ultrasound ၊ X ray ၊ သားအိမ်​တွင်း ​မှန်​​ပြောင်းဖြင့်​ ကြည့်​ခြင်း စတဲ့ လိုအပ်​တာ​တွေ ပြုလုပ်​ရပါမယ်​... ထိုမှ တဆင့်​ IUD အား ​​တွေ့ရှိပါက အထက်​မှာ ​ပြောခဲ့သလို ​သေချာစွာ ပြန်​လည်​ ထုတ်​ယူနိုင်​ပါပြီ..လိုအပ်​ပါက နာကျင်​ခြင်း မရှိ​စေရန်​ လိုအပ်​တဲ့ ထုံ​ဆေးကို အသုံးပြု​ပေးပါလိမ့်​မယ်​..
အကယ်​၍ မိမိဟာ IUD မှ တခြား​သော သ​န္ဓေတားမှု ပုံစံ​ပြောင်းခြင်း(​သောက်​​ဆေးသို့ ​ပြောင်းခြင်း) (သို့) ရင်​​သွေးရဖို့ ကြိုးစားခြင်း စတဲ့ အရာ​တွေကို​တော့ သက်​ဆိုင်​တဲ့ ဆရာဝန်​ဆီမှာ schedule အချိန်​ဇယားကို ​သေချာစွာ ​ဆွေး​နွေးနိုင်​ပါတယ်​...
သာယာလှပတဲ့ အိမ်​​ထောင်​မှုနှင့်​ ကျန်းမာ​ပျော်​ရွှင်​​သော အမျိုးသမီးများဘဝကို ပိုင်​ဆျုင်​ကြပါ​စေလို့ ​တောင်းဆု​မေတ္တာပြုလျက်​....